Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na -ere nnukwu ịwụ Pingtai
Nkọwa ngwugwu: Plywood case
Kedu usoro usoro nke ezé ịwụ excavator
The usoro eruba nke excavator ịwụ ezé: ájá nkedo, ibe ya bụrụ nkedo, nkenke mgbatị.
Ezé ịwụ excavator bụ akụkụ dị mkpa eji eri ihe na excavator. O yiri ezé mmadụ. Ọ bụ nchikota ịwụ bọket nke nwere ntọala ezé na ọnụ ezé, ejikọtara ha abụọ site na pin pin. Maka na akụkụ ịwụ ezé ịwụ na -adaghị adaba bụ ọnụ ezé, ọ bụrụhaala na nnọchi ọnụ nwere ike ịbụ.
Nhazi ọkwa dabere na gburugburu ebe mgbaba excavator ịwụ. Enwere ike kewaa ezé ịwụ excavator n'ime ezé oke okwute (nke a na -eji maka igwe igwe, okwute okwute, wdg), ezé arụrụ arụ (nke a na -eji egwu ala, ájá, wdg), ezé conical (nke a na -eji maka igwu coal).
Enwere ike kewaa ezé ịwụ excavator n'ime ezé pin bọket (Hitachi excavator), ezé ịwụ nchara (Komatsu excavator, Caterpillar excavator, Daewoo excavator, Kobelco excavator, wdg), rotary na -egwu ala ezé ịwụ (ezé ịwụ ịwụ).
Ịwụ ịwụ nkọwa nkọwa
Nkọwa: BUCKET TEETH MINING OPERATION OKWU dị mkpa
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Igbe plywood
Ihe: Alloy ígwè
Usoro: Nkenke Nkedo / ibe ya bụrụ
Ogo: Ngwuputa ọrụ dị arọ
Oge ikike: 24 ọnwa
Agba: Yellow ma ọ bụ ọbara ọbara ma ọ bụ oji ma ọ bụ onye ahịa achọrọ
Ngwa: Onye na -egwupụta ihe
Otu esi ekpe ikpe ezé ịwụ na -erughị eru nke onye na -egwupụta ihe
Ezé bọket na -egwupụta n'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị ruo ụbọchị 3 (ihe dị ka awa 36) agaghị eru eru dị ka ngwaahịa erughị eru. Enwere ntụpọ furrow doro anya n'elu ezé ịwụ na obere nrụrụ plastik n'ọnụ ya. Nnyocha ike nke ezé ịwụ na -arụ ọrụ ịwụ na kọntaktị ihe ahụ gwupụtara, na usoro ogwugwu zuru oke na ọkwa dị iche iche nke nrụgide dị iche iche, akụkụ ọnụ nke kọntaktị mbụ na elu ihe ahụ, n'ihi na ọsọ dị ngwa, ọnụ nke ịwụ ahụ eze site na mmetụta siri ike. Ọ bụrụ na mkpụrụ ezé ịwụ ga -adị ala, ọ ga -emepụta nrụrụ plastik n'ọnụ ya. Ezé ịwụ ndị ahụ na -erughị eru ka a gwụchara, na -egbu maramara ma na -ata ata, wee hụ na isi awọ gbara ya gburugburu na ọchịchịrị dị n'etiti, na -egosi na ezé ịwụ bụ ihe nkedo. Isi ihe mejupụtara alloy (akụkụ pere mpe %) bụ 0.38C, 0.91Cr, 0.83Mn na 0.92Si. Njirimara igwe nke ihe igwe na -adabere na nhazi na usoro ọgwụgwọ ọkụ nke ụlọ ọrụ ihe.
Kedu uru mmepụta nke ezé ịwụ excavator nke ụlọ ọrụ anyị
Nyocha arụmọrụ nha nke ịwụ site na MLD-10 na-eyi igwe nnwale nnwale. Nguzogide na -eyi nke matriks na ntinye dị mma karịa nke nchara 45 nchara n'okpuru ọnọdụ nke obere mmetụta. N'otu oge ahụ, nkwụsị mgbochi nke matriks na ntinye dị iche. The matriks bụ eyi na-eguzogide karịa inserts. Ihe mejupụtara na akụkụ abụọ nke matriks na ntinye dị nso na nke ahụ na ezé ịwụ. Ntinye n'ime ezé ịwụ bụ tumadi ka ọ rụọ ọrụ nke igwe oyi. N'oge usoro nkedo, a na -anụcha matriks iji meziwanye ike ya na iyi mgbochi. N'ihi mmetụta nke ikpo ọkụ, ihe ntinye na -emepụta ihe owuwu ndị yiri ya na mpaghara ịgbado ọkụ ọkụ, nke anaghị arụ ọrụ n'ịkwalite iguzogide iyi. Ọ bụrụ na a na -eme ọgwụgwọ ọkụ kwesịrị ekwesị mgbe nkedo gasịrị iji meziwanye nhazi nke ntinye, a ga -emeziwanye nkwụsi ike flax na ndụ ọrụ nke ezé ịwụ.
1.Ị bụ onye azụmaahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
Anyị bụ ndị nrụpụta nwere ikike mbupụ. Ụlọ ọrụ anyị dị na Quanzhou Nanan obodo Fujian Province China. Anyị nwere ahụmịhe karịrị afọ iri atọ na ụlọ ọrụ a.
2.Kedu ka m ga -esi jide n'aka na akụkụ ahụ ga -adabara bulldozer m?
Biko zitere anyị nọmba nlereanya ma ọ bụ nọmba mbụ nke akụkụ ahụ, anyị ga -enye eserese ma ọ bụ tụọ nha anụ ahụ ma soro gị kwenye.
3.What bụ kacha nta iji?
Ọ dabere n'ụdị ngwaahịa ịzụrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ngwaahịa mgbe niile ma anyị nwere ngwaahịa, ọ dịghị mkpa maka MOQ.
4.Can ị nwere ike inyere ndị ahịa aka ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ?
Ngalaba mmepe teknụzụ anyị bụ ọkachamara n'ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ maka ndị ahịa. Ndị ahịa kwesịrị ịnye eserese, akụkụ ma ọ bụ ezigbo nlele maka ntụnyere anyị.
5.What bụ gị ụzọ oge?
Oge nnyefe nkịtị bụ ihe dịka otu ọnwa, ọ bụrụ na anyị nwere ihe dị ka otu izu
T/T ma ọ bụ L/C. usoro ndị ọzọ nwekwara mkparịta ụka.
7.Can ị na -emepụta ngwaahịa na ika anyị?
N'ezie, a na -anabata anyị ka anyị na -arụkọ ọrụ ọnụ dị ka ọrụ ahaziri iche.
A na -anabata OEM/ODM, Site na echiche ruo ngwongwo emechara, anyị na -eme ihe niile (imewe, nyocha ụdị, ngwa ọrụ na mmepụta) na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
1.One akwụkwọ ikike otu afọ, nnọchi n'efu maka ndị gbajiri na ndụ adịghị mma.
2.Product customization OEM /ODM iji.
3. Nye ndị ahịa anyị nkwado ntanetị ma ọ bụ vidiyo.
4.Nyere gị aka iji ahịa anyị dị elu na ọrụ kacha mma zụlite ahịa gị.
5.VIP ọgwụgwọ onye nnọchi anya anyị.
Nke gara aga: Ọrụ ịwụ bọket dị arọ
Osote: Ọrụ Ngwuputa ụgbọ ala
CATERPILLAR BULLDOZER D10 TRACK ROLLER Mgbakọ.
Bit ejedebela ugboro abụọ, Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Iburu Track ala, Ike kpọchie, Ndị na -agba egwu Rubber Track, Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ,